Foomka Codsiga Visa-ha New Zealand | Diiwaangelinta NZeTA
Foomka Codsiga Fiisaha New Zealand eTA
1. Soo gudbi Codsiga khadka tooska ah
2. Dib u eeg oo Xaqiiji Bixinta
3. Hesho Visa La Oggolaaday
Fadlan gali dhammaan macluumaadka Ingiriisiga
Faahfaahin ka bixi baasaboorka aad ku gali doonto New Zealand. Gali faahfaahintaan sida saxda ah ee ku qoran baasaboorkaaga.
Baasaboor Dalka *
Xulo Waddanka Baasaboorrada Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia iyo Herzegovina Botswana Brazil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Central African Republic Chad Chile Shiinaha Colombia Comoros Congo Congo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah Costa Rica Cote D'Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Denmark Jabuuti Dominika Dominican Republic Ecuador Masar El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Itoobiya Itoobiya Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland Hindiya Indonesia Iran, Republic of Islamic Ciraaq Ireland Israa'iil Italy Jamaica Japan Urdun Kazakhstan Kenya Kiribati North Korea Koonfurta Kuuriya Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Jamhuuriyadda Lao Dadka Democratic Latvia Lubnaan Lesotho Liberia Liibiya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Islands Marshall Mauritania Mauritius Mexico Micronesia, Federaalka ah Moldova, Republic of Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Waqooyiga Makedoniya Norway Cumaan Pakistan Palau Palestine Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Filibiin Poland Portugal Qadar Romania Russian Federation Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent iyo Grenadines ah Samoa San Marino Sao Tomé iyo Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Jasiiradaha Solomon Soomaaliya Koonfur Afrika South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Iswidhan Switzerland Suuriya Arab Republic Taiwan Tajikistan Tansaaniya, United Republic of Thailand Timor Leste- Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates Boqortooyada Ingiriiska United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City
Lambarka Baasaboorka *
Taariikh Baasaboor Baasaboor *
Taariikhda Dhaceysa Baasaboorka *
Uma baahnid NZeTA haddii aad ku safreyso baasaboor New Zealand ama Australian ah.
Faahfaahinta shaqsiga iyo safarka
Qoyska / magaca dambe *
Gali magacaaga dambe sida ku cad baasaboorkaaga
Magacyada / La Bixiyay *
Gali magacaaga koowaad iyo kan dhexe sida ku cad baasaboorkaaga
Wadanka Dhalashada *
Xulo Waddankaaga Dhalashada Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Jacaylku Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bonaire, Saint Eustatius iyo Saba Bosnia iyo Herzegovina Botswana Brazil Territory Antartic Territory Territory British Indian Ocean Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Cayman Islands Central African Republic Chad Chile Shiinaha Colombia Comoros Congo Congo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah Cook Islands Costa Rica Cote D'Ivoire Croatia Cuba Curacao Cyprus Czech Republic Denmark Jabuuti Dominika Dominican Republic Ecuador Masar El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Itoobiya Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana Faransiis Polynesia Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland Hindiya Indonesia Iran, Republic of Islamic Ciraaq Ireland Isle of Man Israa'iil Italy Jamaica Japan Jersey Urdun Kazakhstan Kenya Kiribati North Korea Koonfurta Kuuriya Kuwait Kyrgyzstan Jamhuuriyadda Lao Dadka Democratic Latvia Lubnaan Lesotho Liberia Liibiya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Islands Marshall Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia Moldova, Republic of Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Waqooyiga Makedoniya Northern Mariana Islands Norway Cumaan Pakistan Palau Palestine Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Filibiin Pitcairn Islands Poland Portugal Puerto Rico Qadar Reunion Romania Russian Federation Rwanda Saint Barthelemy Saint Helena Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre iyo Miquelon Saint Vincent iyo Grenadines ah Samoa San Marino Sao Tomé iyo Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten (qayb Dutch) Slovakia Slovenia Jasiiradaha Solomon Soomaaliya Koonfur Afrika South Georgia iyo Islands Sandiwiij South South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard iyo Jan Mayen Swaziland Iswidhan Switzerland Suuriya Arab Republic Taiwan Tajikistan Tansaaniya, United Republic of Thailand Timor Leste- Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turkiga oo Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates Boqortooyada Ingiriiska United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Virgin Islands, British Virgin Islands, US Wallis iyo Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Meesha dhalashada *
Gali Magaaladdaada ama Gobolka Aad ku dhalatay sida ku cad baasaaboorkaaga
Lambarka Aqoonsiga Qaranka
Xulo Jinsi Male Female jinsi
Taariikhda La Filayo Imaanshaha *
Waxaad ka heli doontaa emayl xaqiijinaya helitaanka Codsigaaga cinwaanka emaylka aad bixiso.
Xaqiiji Email Address *
Miyaad hore magacaaga u beddeshay?*
Magacii hore loo bixiyey *
Qoyska hore / magaca dambe *
Ma leedahay degenaansho joogto ah oo Australiya ah?*
Deganeyaasha Joogtada ah ee Australiyaanka ah uma baahna inay bixiyaan khidmadaha IVL. Markaad u safreyso New Zealand waxaad u baahan doontaa inaad haysato fiiso joogto ah oo Australiya ah oo kuu oggolaanaysa inaad dib ugu soo noqoto Australia dibedda.
Ma waxaad ugu safraysaa New Zealand markab dalxiis?*
NZeTA-kan waxaa la isticmaali karaa oo keliya haddii aad safar ugu safraysid New Zealand.
Miyaad sii joogi doontaa New Zealand?*
Haa Maya, waxaan ahay rakaab transit ah.
NZeTA-gaagu wuxuu ku ansaxayaa socdaalka kaliya garoonka diyaaradaha ee Auckland. Haddii aad qorsheyneyso inaad ka baxdo garoonka diyaaradaha oo aad gasho New Zealand, waa inaad ku muujisaa tan dalabkaaga NZeTA oo aad bixisaa khidmadaha IVL.
Xaq uma lihid NZeTA. Dalbo fiiso booqasho ah.
Haddii aadan ahayn Degane Joogto ah ee Australiyaanka ah markaa tan NZeTA waxaa loo isticmaali karaa oo keliya haddii aad tahay rakaab transit oo sii maraya garoonka diyaaradaha ee Auckland ama haddii aad safar ugu safreyso New Zealand. Rakaabka Transit-ka ma geli karaan New Zealand.
Ma waxaad ka sii gudbeysaa garoonka diyaaradaha ee Auckland markaad ku sii jeeddo ama ka soo degto Australia?*
Haddii aadan ahayn Degane Joogto Australiya ah markaa NZeTA waxaa loo isticmaali karaa oo keliya haddii aad tahay rakaab transit ah oo ka sii gudbaya Madaarka Caalamiga ah ee Auckland ee u socda ama ka tagaya Australia ama haddii aad safar ugu safreyso New Zealand. Rakaabka Transit-ka ma geli karaan New Zealand.
Ma waxaad u booqaneysaa New Zealand daaweyn caafimaad ama la-talin?*
Weligaa waligaa masaafurin, miyaa lagaa saaray ama lagaa saaray gelitaanka dal kale (maaha New Zealand)?*
Ma lagaa mamnuucay inaad soo gasho New Zealand sababo la xiriira masaafurin hore oo lagagaga keenay New Zealand darteed?*
Weligaa ma lagugu qabtay, dacwad kugu soo oogay ama xukun ma ku soo gaadhay waddan kasta?*
Weligaa ma lagugu xukumay dembi lagugu xukumay 5 sano ama xadhig ka badan?*
10-kii sano ee la soo dhaafay ma lagugu xukumay dambi lagugu xukumay xabsi ah 12 bilood ama ka badan?*
Bixi sawir la aqbali karo oo wejigaaga ah. Haddii kale, waad ka boodi kartaa sawir qaadista hadda oo waxaad heli kartaa tilmaamo ku saabsan sida goor dambe loogu diro emayl.
Miyaad awoodi kartaa inaad sawir soo dhigto hadda*
Waad soo rogi kartaa sawir dhaweyd ama waxaad isticmaali kartaa kamaradda qalabkaaga si aad sawir uga qaaddo.
Sawirkaagu waa inuu:
- muuji muuqaal buuxa, cad, iyo hore ee wejiga codsadaha
- wuxuu ku tusayaa iyadoo indhahaagu furan yihiin iyo aragti dhexdhexaad ah
- Ha haysan wax daboolaya indhahaaga ama wejigaaga, sida muraayadaha indhaha ama timaha
- muuji adiga kaliya
- ha noqonin mid aad u dhalaalaya ama aad u madow oo leh muuqaal cad, midab khafiif ah
- hooska ma laha wajiga ama xagga dambe
- hadaad xirato garbasaar madaxa / wejiga ah, fadlan hubi in soohdinta timaha ee madaxa iyo soohdinta garka si muuqata u muuqato
× Kaliya noocyada faylka ee soo socda ayaa loo oggol yahay: jpeg, jpg, png, pdf
× Success! Sawir si guul leh loo gudbiyay
Waxaad heli doontaa emayl ay ku qoran yihiin tilmaamo ku saabsan sida aad noogu soo diri karto sawirkaaga.
Waxaan cadeynayaa in macluumaadka aan ku bixiyay arjigan inuu run yahay, oo dhammeystiran oo sax ah.
Waan akhriyay oo waan fahmay shuruudaha iyo xaaladaha iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Adigoo daalacanaya, marin u helida iyo adeegsiga shabakadan, waad fahantay oo aad ogolaatay Shuruudaha iyo shuruudaha lagu dejiyay halkan, ee loo yaqaan "shuruudaheena", iyo "Shuruudaha iyo Xaaladaha". codsadayaasha eTA, oo ay ku xareynayaan codsigooda NZeTA iyada oo loo marayo degelkan waxaa loogu yeeri doonaa "codsade", "isticmaale", "adiga". Erayada "anaga", "annaga", "kuweena", "degelkan" toos baa loola jeedaa.
Waa muhiim inaad ogaato in danaha qof walba danaha sharciga ah la ilaaliyo iyo in xiriirka idinka dhexeeyo uu ku dhisanyahay kalsooni. Fadlan la soco inaad aqbasho shuruudahan adeeg si aad uga faa'iideysato bartayada iyo adeegga aan bixinno.
Macluumaadka soosocda waxaa laga diiwan geliyay xog shaqsiyadeed kaydka shabakada: magacyada; taariikhda iyo goobta uu ku dhashay; faahfaahinta baasaboorka; xog bixinta iyo dhacdada; nooca caddaynta / dukumentiyada; telefoonka iyo cinwaanka emaylka; cinwaanka boostada iyo cinwaanka joogtada ah; buskud; faahfaahinta kumbuyuutarka ee farsamada, diiwaangelinta lacag bixinta iwm.
Macluumaadka la bixiyay dhammaan waa la diiwaangeliyaa laguna keydiyaa keydka macluumaadka sugan ee degelkan. Xogta laga diiwaangaliyay websaydhkan lama wadaagi maayo kamana quseeyo qaybaha saddexaad, marka laga reebo:
Markuu adeegsadeha si cad u oggolaaday inuu u oggolaado ficilada noocaas ah.
Markay ubaahantahay maareynta iyo dayactirka websaydhkan.
Marka la soo saaro amar sharci ku xiraya, oo u baahan macluumaad.
Markii la ogeysiiyo iyo macluumaadkaaga shaqsiyadeed lama takoori karo.
Sharciga wuxuu farayaa in aan faahfaahintaas bixinno.
Loogu wargaliyay sida foomka macluumaadka shakhsiyeed aan lagu takoori karin.
Shirkadda waxay ku dhaqaaqi doontaa arjiga dalabka iyadoo la adeegsanaayo macluumaadka uu codsaduhu bixiyay.
Websaydhkan mas'uul kama ah wixii macluumaad qaldan ee la soo bandhigo.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xeerashaheena qarsoodiga ah, arag Nidaamkayaga Asturnaanta.
Adeegsiga shabakaddan, oo ay ku jiraan dhammaan adeegyada la bixiyo, ayaa ku xaddidan isticmaalka shakhsi ahaaneed oo keliya. Adoo adeegsanaya ama adeegsanaya shabakadan, isticmaaluhu wuxuu oggol yahay in aanu wax ka beddelin, nuqul ka qaadin, dib u isticmaalin ama kala soo degin mid ka mid ah websaydhkan adeeg ganacsi. Dhammaan xogta iyo content degelkan waxaa xuquuqdiisa iska leh. Kani waa degel gaar loo leeyahay, hanti hay'ad gaar loo leeyahay, oo aan ku xirnayn Dowladda New Zealand.
Isticmaalayaasha shabakadan looma ogola inay:
U gudbi faallooyinka aflagaadinta websaydhkan, xubnaha kale ama dhinac kasta oo saddexaad.
Ku faafi, wadaag ama nuqul wax kasta oo dambi ah bulshada guud iyo akhlaaqda.
Ku lug yeelo nashaad u horseedi kara ku xadgudubka xuquuqaha loo haysto webkaan ama hantida aqooneed ..
Ku lug yeelo fal dambiyeed.
Hawlaha kale ee sharci darada ah.
Qofka adeegsada shabakadan ma iska indhatirayaa sharciyada halkan lagu dhigay; waxyeelo u geystaa dhinac saddexaad marka la adeegsanayo adeegyadeena, isaga / iyada ayaa loo qabsan doonaa mas'uuliyad waxaana looga baahan doonaa inuu daboolo kharashyada oo dhan. Kama qaadan karno mana ka qeyb qaadan doonno ama mas'uul kama noqon doonno wixii waxyeelo ah ee ay geystaan ​​isticmaaleyaasha shabakadan.
Haddii ay dhacdo inuu adeegsado ku xadgudbo qawaaniinta uu dhigayo Shuruucdayada iyo Shuruudaheena, waxaan xaq u leenahay inaan sii wadno talaabooyinka sharciga ee ka dhanka ah dambiilaha.
Joojinta ama Ansixinta Codsiga NZeTA
Haddii adeegsaduhu ku lug yeesho wax kasta oo mamnuuc ah, ee halkan lagu sheegay, waxaan xaq u leenahay inaan burinno wixii dalabyo fiiso ah oo socda; in la diido diiwaangelinta isticmaaleha; si looga saaro akoontiga adeegsadaha iyo macluumaadka shaqsiyeed websaydhka.
Codsaduhu wuu reebban yahay:
Gali macluumaad shakhsiyeed oo been ah
Qari, iska dhaaf, iska indha tir mid kasta oo ka mid ah macluumaadka dalabka NZeTA ee loo baahan yahay inta lagu jiro diiwaangelinta
Iska indha tir, beddel ama ka tag mid ka mid ah meelaha macluumaadka looga baahan yahay inta lagu jiro hawsha dalabka NZeTA
Haddii mid ka mid ah qodobbada kor ku xusan ay khuseeyaan codsade leh NZeTA horey loo ansixiyay, waxaan xaq u leenahay inaan tirtirno ama joojinno macluumaadka codsadaha.
Ku Saabsan Adeegyadeena
Adeegyadeena waa sidii adeeg bixiye adeeg oo khadka tooska ah loo adeegsado si loogu fududeeyo habka elektaroonigga ah si muwaadiniinta ajnabiga ahi u booqdaan New Zealand. Wakiiladeenu waxay gacan ka geystaan ​​sidii ay uga heli lahaayeen Ogolaanshahaaga Safarka Dowlada New Zealand oo aan markaa ku siin doono. Adeegyadeenu waxaa ka mid ah, in si habboon dib loogu eego dhammaan jawaabahaaga, tarjumaadda macluumaadka, ka caawinta buuxinta arjiga iyo hubinta dukumintiga oo dhan sax ahaanta, dhammaystirka, higgaadinta iyo naxwaha naxwaha. Intaas waxaa sii dheer waxaan kula soo xiriiri karnaa emayl ama taleefan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah si aan u socodsiino codsiga. Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan adeegyadayada qaybta "annaga" ee degelkan.
Markaad dhammaystirto foomka dalabka ee ku qoran degelkeenna, dalabkaaga dukumiintiga oggolaanshaha safarka ayaa la soo gudbin doonaa ka dib dib u eegista khabiirka. Codsigaaga elektarooniga ah wuxuu ku xiran yahay ogolaanshaha Dowladda New Zealand. Marar badan ayaa codsigaaga lagu baaraandegi doonaa oo lagu siin doonaa wax ka yar 24 saacadood. Si kastaba ha noqotee, haddii wax faahfaahin ah si khaldan loo geliyay ama aysan dhameystirnayn, dalabkaaga waa la daahi karaa.
Kahor bixinta lacagta ruqsada safarka, waxaad fursad u heli doontaa inaad dib u eegto dhammaan faahfaahinta aad ku bixisay shaashadaada isla markaana aad sameyso isbedelo haddii loo baahdo. Haddii aad khalad sameysay, waxaa muhiim ah inaad saxdaa ka hor intaadan sii wadin. Markaad xaqiijiso faahfaahinta, waxaa lagugu dhiirigelin doonaa inaad geliso faahfaahinta kaarkaaga deynta ee kharashkeena adeegga.
Waxaan saldhig ku nahay Aasiya iyo Oceania.
Waxaan si buuxda uga horreynaa khidmadaha dalabka NZeTA. Ma jiraan wax dheeraad ah oo lagu daray ama qarsoon.
Hay'addeenu waxay ka qaaddaa $ 64 dusha sare khidmadaha Dowladda New Zealand.
Ogsoonow inaad ku soo gudbiso arjigaaga NZeTA shabakadan macnaheedu waa inaan lagaa qaadi doonin khidmadda macaamilka ee 2.5%, oo ay ku soo dallacday websaydhka Dowladda New Zealand. Markii Dawladda New Zealand ay na siiso lacag celin, isla sidaas ayaa loo samayn doonaa kuwa codsadayaasha ah ee la diiday codsigooda eTA ee New Zealand.
Wax lacag celin ah looma sameyn doono wax dalab ah oo la soo gudbiyo kadib. Haddii ay dhacdo in dalabkaaga aan loo gudbin websaydhka Dawladda New Zealand, lacag celin qayb ah ayaa la codsan karaa si loo tixgeliyo.
Cayrin Ku meelgaar ah oo Adeeg ah
Websaydhkan waxaa si ku meel gaadh ah looga joojin karaa dayactirka adeegga ama sabab kale, iyadoo la siinayo ogeysiis hore codsadayaasha xaaladaha soo socda:
Adeegyada shabakada looma sii wadi karo sababao ka baxsan xakamayntayada sida musiibooyinka dabiiciga ah, mudaaharaadka, casriyeynta kombiyuutarka,
Websaydhku wuu joogsanayaa shaqadiisa sababtuna tahay korantada oo aan la filayn ama dab
Dayactirka nidaamka ayaa loo baahan yahay
Cayrinta adeega ayaa loo baahan yahay iyadoo ay ugu wacan tahay isbeddelada nidaamka maamulka, dhibaatooyinka farsamada, cusbooneysiinta ama sababaha kale
Isticmaalayaasha websaydhkan lagula xisaabtami maayo wixii waxyeelo ah ee ka dhalan kara sabab la xidhiidha hakinta ku-meelgaarka ah ee adeegga.
Ka dhaafida Mas'uuliyadda
Adeegyada ay bixiso degelkani waxay ku kooban yihiin xaqiijinta faahfaahinta foomka fiisaha iyo soo gudbinta dalabka NZeTA ee khadka tooska ah. Sidaa awgeed, shabakadan ama mid ka mid ah wakiilladooda mas'uul kama noqon karaan natiijooyinka ugu dambeeya ee arjiga maadaama kuwani ay ku sugan yihiin awoodda buuxda ee Dowladda New Zealand. Hay'addaan lagula xisaabtami maayo wixii go'aanno kama dambeys ah ee la xiriira fiisaha sida diidmada fiisaha. Haddii dalabka fiisaha ee codsadaha la joojiyo ama loo diido sababo marin habaabin ama khaldan, websaydhkan mas'uul kama noqon doono mas'uulna kama noqon doono.
Adigoo adeegsanaya websaydhkan waxaad oggolaatay inaad raacdo oo adeecdo qawaaniinta iyo sidoo kale xaddidaadda isticmaalka websaydhka, ee halkan lagu dajiyay.
Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka bedelno oo wax ka beddelno waxa ku jira Shuruudaha iyo Shuruudaha iyo waxa ku jira websaydhkaan wakhti kasta oo la helo. Isbeddel kasta oo la sameeyo si dhakhso ah ayaa loo dhaqan galayaa. Adigoo adeegsanaya websaydhkan, waad fahantay oo si buuxda u oggolaatay inaad u hoggaansanto qawaaniinta iyo xayiraadaha ay degsatay degelkan, oo aad si buuxda ugu raacsan tahay inay tahay masuuliyaddaada inaad hubiso xilli kasta ama wixii isbeddelo ah ee soo baxa.
Maaha La-Taliyaha Socdaalka
Waxaan bixinaa caawimaad si aan wax uga qabanno adiga oo mataleysa mana siino wax talobixin socdaal ah oo ku saabsan waddan kasta.
Waxaan si hufan uga hadlaynaa macluumaadka shakhsiga ah ee aan ururinno, sida loo ururiyo, loo isticmaalo loona wadaago. 'Macluumaadka Shakhsiyeed' waxaan uga jeednaa macluumaad kasta oo loo isticmaali karo in lagu aqoonsado shaqsi, keligiis, ama lagu daro macluumaad kale.
Waxaan u heellan nahay ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed. Uma isticmaali doonno macluumaadka shakhsiyeed ujeeddooyin kale oo aan ka ahayn kuwa ku qeexan Nidaamkan Khaaska ah.
Adoo adeegsanaya degelkeenna waxaad ku raacsan tahay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo shuruudihiisa.
Macluumaadka shaqsiyeed ee aan soo aruurino
Waxaan ururin karnaa noocyada macluumaadka shakhsiyeed ee soo socda:
Xogta shaqsi ee aad adigu bixiso
Codsadeyaashu waxay na siinayaan macluumaadkan si aan uga baaraandegno codsiga fiisaha. Tan waxaa loo gudbin doonaa hay'adaha lagama maarmaanka ah si ay go'aan uga gaaraan haddii ay oggolaadaan ama diidaan dalabka. Macluumaadkan waxaa ku soo gala codsadayaasha foomka internetka.
Macluumaadkan shaqsiyadeed waxaa ku jiri kara xog fara badan oo ay ku jiraan noocyo macluumaad ah oo loo arko inay yihiin kuwo xasaasi ah. Noocyada macluumaadka waxaa ka mid ah: magacaaga oo buuxa, taariikhda dhalashadaada, taariikhaha safarka, dekedda aad timaaddo, cinwaanka, socdaalka socdaalka, faahfaahinta baasaboorka, jinsiga, isirka, diinta, caafimaadka, macluumaadka hidda-wadaha, iyo asalka dambiyada.
Dukumentiyada khasabka ah
Waxaa loo baahan yahay in la codsado dukumiinti si looga baaraandego codsiyada fiisaha. Noocyada dukumiintiyada aan codsan karno waxaa ka mid ah: baasaboorro, aqoonsiyo, kaararka deggenayaasha, shahaadooyinka dhalashada, waraaqaha casuumaadda, bayaannada bangiga, iyo waraaqaha oggolaanshaha waalidka.
Waxaan u adeegsanaa barxadda falanqaynta ee khadka tooska ah kaas oo ka soo ururin kara macluumaadka ku saabsan aaladdaada, biraawsarkaaga, goobta laga helo adeegsadaha booqda degelkeenna. Macluumaadka qalabkan waxaa ka mid ah cinwaanka IP-ga isticmaalaha, goobta juqraafi ahaan, iyo biraawsarka iyo nidaamka hawlgalka.
Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka shakhsiyeed ee aan ururinno kaliya dalab Visa ah. Macluumaadka isticmaalayaasha waxaa loo isticmaali karaa qaababka soo socda:
Si loo farsameeyo codsigaaga fiisaha
Waxaan u isticmaalnaa xogta shakhsiga ah ee aad ku qorto foomka dalabka si aan uga baaraandegno codsigaaga fiisaha. Macluumaadka la bixiyay waxaa lala wadaagayaa hay'adaha ay khusayso si ay u ogolaadaan ama u diidaan dalabkaaga.
Si aad ula xiriirto codsadayaasha
Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka aad bixiso si aan ula xiriirno. Waxaan tan ugu isticmaalnaa inaan uga jawaabno su'aalahaaga, wax ka qabanno codsiyadaada, ka jawaabno emaylka, iyo inaan u dirno ogeysiisyo la xiriira heerarka codsiyada.
Si loo hagaajiyo degelkan
Si loo hagaajiyo khibrada guud ee isticmaaleyaashayada websaydhka waxaan u adeegsanaa barnaamijyo kala duwan si aan u falanqeyno macluumaadka aan ururinno. Waxaan u isticmaalnaa xogta inaan ku horumarino degelkeenna iyo sidoo kale adeegyadayada.
Si aad u hoggaansanto sharciga
Waxaan u baahan karnaa inaan wadaagno macluumaadka shaqsiyeed ee isticmaaleyaasha si aan ugu hoggaansano sharciyada iyo qawaaniinta kala duwan. Tani waxay noqon kartaa inta lagu gudajiro dacwad sharciyeed, xisaab xir, ama baaritaanno.
Xogtaada waxaa loo isticmaali karaa in lagu hagaajiyo talaabooyinka amniga, si looga caawiyo kahortaga howlaha khiyaanada, ama si loo xaqiijiyo u hogaansanaanta Shuruudaha iyo Xaaladaheena iyo siyaasada Kukiyada.
Sida loo wadaago macluumaadkaaga qaaska ah
Lama wadaagno xogtaada shakhsi ahaaneed dhinacyada saddexaad marka laga reebo xaaladaha soo socda:
Waxaan la wadaageynaa macluumaadka iyo dukumiintiyada aad siiso dowlada si looga shaqeeyo dalabka fiisadaada. Dawladdu waxay u baahan tahay xogtan si ay u oggolaato ama u diiddo dalabkaaga.
Ujeedooyin sharci awgeed
Marka sharciyada ama qawaaniintu ay nooga baahan yihiin inaan sidaa yeelno, waxaan u siideyn karnaa macluumaadka shakhsiyadeed hay'adaha ay khuseyso. Tan waxaa ka mid noqon kara xaalado marka aan u hoggaansameyno sharciyada iyo qawaaniinta ka jira meel ka baxsan waddanka uu deggan yahay.
Waxaa laga yaabaa inaan u baahanahay inaan shaaca ka qaadno macluumaadka shakhsi ahaaneed si aan uga jawaabno codsiyada ka imanaya mas'uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha, si aan ugu hoggaansano habsocodka sharciga, si aan u dhaqan galino Shuruucdeenna iyo Shuruudeenna ama siyaasadahayaga, si aan u ilaalino howlaheenna, si aan u ilaalino xuquuqdeena, si aan noogu oggolaano in aan raacno wax ka qabashada sharciga, ama in la xadido waxyeelada madaniga ah ee ina soo gaarta.
Maareynta iyo tirtirka macluumaadkaaga shaqsiyeed
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato tirtirka macluumaadkaaga shaqsiyeed. Waxaad sidoo kale codsan kartaa nuqul elektiroonig ah dhammaan macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa soo aruurinnay.
Fadlan la soco inaan u hogaansami karin codsiyada muujinaya macluumaadka ku saabsan dadka kale mana tirtiri karno macluumaadka laga yaabo in loo baahdo inaanu sharciga ilaalino.
Waxaan u adeegsanaa sir-sugid sugan si aan uga hortagno luminta, xatooyada, si xun u isticmaalka, iyo wax ka beddelka xogta shaqsiyeed. Macluumaadka shakhsiga ah waxaa lagu keydiyaa xogta keydka ee la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo furaha sirta ah iyo gidaarrada, iyo sidoo kale tallaabooyinka amniga jirka.
Macluumaadka shakhsi ahaaneed waxaa la hayaa muddo saddex sano ah, saddex sano ka dib si toos ah ayaa loo tirtirayaa. Siyaasadaha iyo habraacyada haynta xogta waxay hubinayaan inaan u hogaansano sharciyada iyo xeerarka.
Adeegsade kastaa wuxuu qirayaa in aysan masuuliyad ka saarnayn websaydhkeena inuu damaanad qaado amniga macluumaadka markay internetka ku dirayaan.
Wax ka beddelka Nidaamkan Khaaska ah
Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka beddel ku sameyno Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyadoo aan horay loo ogeysiin. Isbadal kasta oo lagu sameeyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu dhaqan gelayaa laga bilaabo xilliga la daabacay.
Waa isticmaale kasta masuuliyadiisu inay hubiso in isaga ama iyadu lagu wargaliyo shuruudaha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah xilligan la joogo ee adeegyada laga iibsanayo ama alaabooyinka ama adeegyada laga helo.
Waxaan nahay karti karo
Waxaad nagala soo xiriiri kartaa websaydhka wixii walaac ah.
Talada socdaalka maaha
Annagu kuma jirno ganacsiga aannu ku siineyno talo bixin xagga socdaalka ah laakiin waxaan mataleynaa magacaaga.
CUSUB ZEALAND eTA
MUUQAALKA ZEALAND eTA DULMAR
NOOCA CODSIGA NZeTA
Wadamada NZeTA ELIGIBILE
Wadamada NZeTA VISA WAIVER
MACLUUMAADKA BOOQASHADA NZeTA
Tilmaamaha Foomka Codsiga
BOOQASHADII UGU HOREYSAY
HUBINTA AMNIGA XUDUUDDA
WAXQABADKA LAGU OGGOL YAHAY NZeTA
KU SOO SOCDA SHARBTA XUN
BOOQASHADA WAQTIGA KOWAAD
NOLOL CUSUB ZEALAND
XADGUDUB IYO INFO CIMILO
Dhadhanka Dhaqanka MAORI
CIYAARAHA CAANKA AH
DIYAARADO KU JIRA SAYLAN CUSUB
SOO BARASHADA CUNKA DUULKA
WAA IN LA ARKAA BOQORADDA
CUNTO CUSUB OO ZEALAND AH
CHATHAM ISLANDS HAGAHA
Toban Lugood oo waaweyn
WAA INAAD BOOQATO BIYAHA
TOP 10 Xeebaha
RABBI KHATAR AH
Makhaayadaha ugu wanaagsan AUCKLAND
Ciyaaraha ugu jecel
WAXBARASHADA TOP EE NZ
CIYAARTA SILSILADA CUSUB
CIYAAR KU SAABSAN NEW ZEALAND
SHIMBIR & XOOLAHA
Safarro Waddo ZEALAND CUSUB
ABEL TASMAN XARUNTA QARANKA
BARKII QARANKA FIORDLAND
24 SAACADO AUCKLAND
QALOOYINKA WAITOMO GLOWWORM
© xuquuqda waxaa leh
Afeef: New Zealand eTA / Visa oo ay soo saartay degelkan ganacsi waxaa si toos ah looga adeegsadaa websaydhka dawladda ee Socdaalka New Zealand (www.immigration.govt.nz). Waxaan caawimaad siineynaa Wakiilada Safarka iyo socdaalayaasha adduunka oo dhan. Dowladda New Zealand uma magacaabin degelkan si toos ah, si dadban ama si gaar ah. Khidmadda khidmadda ayaa laga qaadaa adeegyadayada kuwa ka codsada degelkan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ajuuradayada waxaa laga heli karaa annaga nagu saabsan .